Waxyiga Waayaha(4): Muqdisho. | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxyiga Waayaha(4): Muqdisho.
Maanta ayaa waxaan hormaray Dugsigii la dhihi jiray Sheekh Suufi, oo igu leh xasuus aanan hilmaamayn inta aan noolahay.
Waxay ahayd Isniin, 31 Diseenbar 1990, oo aan subaxii u soo kallahnay inaan galno imtixaankii Nusasanaha. Iskoolka waa Sheekh Suufi oo aan ku imid beddel sannad ka hor, kadib markii aan ka soo qaxay B/weyne oo ay macallimiintii Masaarida tagi waayeen amini darro awgeed. Kolkii uu macallinkii Masaarida ahaa qaybiyay waraaqahii ugu horreeyay ee imtixaanka ayaa waxaan maqalnay daryaankii madfacii ugu horreeyay ee Muqdisha ka dhaca, oo uu ka dhashay argagax iyo fajac.
Aniga waxaan ogaaday in hororkii aan uga soo cararay B/weyne uu iiga daba-yimid Muqdisho, ayna jirin meel kale oo la ciirsado. Macalinkii Masaarida ahaa ayaa orod isku taabtay oo u cararay xagii xafiiska maamulaha.
Waxaan ku xargagay kursigii aan fadhiyay, dhidid waaweyna oo qooyay warqaddii imtixaanka ayaa farahayga ka da’aya. Qolkii waxaa isku gedaamay boor ka soo daatay darbiyada..Waxa aan hilmaamaynin waa ardadii Reer Xamar cadcad ahaa oo fasalka nala dhiganayay iyo damaashaadkii iyo farxaddii ka muuqatay…… Midbaa ku boodboodayay miisaska dushood oo lahaa: Haa, abbaa, ma takhaannaa waxa dhacooyo?…Madfacaa la dhahaa!!!!.
Aniguse waxaa halmar i wada hareeyay boorkii darbiga iyo daruur murugo ah. Waxaan garanayaa saansaanta bilaabatay, waxaan garanayaa madfaca dhacay noociisa iyo sida uu wax u gumaado iyo waliba goorta la adeegsado. Madaxa baan hoos u raariciyay.
Maalintaa waxaan ka baxay Dugsiga aniga oo xabadka ku siqayo. Maanta Sheekh Suufi waxaa dib u dayactiray walaalaheenna Turkida waxaana dhigto arday Soomaaliyeed.
Qoraa: Cabduraxiim Shaafici